Yenza ufakelo lwezandiso ze-Gnome kwi-Ubuntu 18.04 LTS | Ubunlog
Nangona abafana kwi-Canonical benze isigqibo shiya umanyano ngokwenza utshintsho kwiGnome Shell ukusukela kuhlobo lwayo lwangaphambili Ubuntu 17.10 Artful Aardvark kunye nexesha elidlulileyo khange benze izinto kakuhle okwangoku Ewe, inqaku elibalulekileyo lilityelwe kwaye iyandothusa loo nto.
Inyani yokwenza imfuduko usuka kwenye indawo uye kwenye kwaye uyikhuphele eluntwini kubandakanya uthotho lweemvavanyo kunye nokukhutshwa kwe-beta ukuze wazi zonke ezo ngxaki zenziwe ngokusetyenziswa ngokufanayo ngaphambi kokumisela ingxelo ezinzileyo.
Kodwa ukuba uyakulibala ukwenza ukudityaniswa Imisebenzi ebalulekileyo ngokwenene ishiya okunqwenelekayo.
Ngeentsuku nje ezimbalwa emva kokumiselwa ngokusesikweni kwe-Ubuntu 18.04 ngeli xesha ukwenzile ufakelo kunye nolungiselelo lokwenza ngokwezifiso inkqubo yakho, usenokuba uqaphele ukuba kufuneka uzame ukufaka ulwandiso lwe-gnome akunakwenziwa ngokulula.
Kwaye oku kuyenzeka kuba isixokelelwano asithumeli ngomsebenzi okhethekileyo "wokudibanisa" phakathi kwezandiso kunye nemeko-bume ye desktop.
Yiyo loo nto Kuya kufuneka sibeke izandla zethu ukuze sikwazi ukufaka ulwandiso lweGnome kwinkqubo yethu.
1 Ungalufaka njani ulwandiso lweGnome Shell kwi-Ubuntu 18.04 LTS?
2 Ulawula njani ulwandiso lweGnome Shell ku-Ubuntu 18.04?
2.1 Ukufaka iphakheji yolwandiso lwe-Gnome kwii-Ubuntu zokugcina
Ungalufaka njani ulwandiso lweGnome Shell kwi-Ubuntu 18.04 LTS?
Ukuba ufuna ukonwabela izibonelelo zokusebenzisa ulwandiso lweGnome Shell kwinkqubo yakho, Kuya kufuneka sifake iphakheji eyongezelelweyo eya kuthi isebenze njengebhulorho phakathi kwewebhusayithi yolwandiso lweGnome kunye nenkqubo yethu.
Yenza ufakelo Olu kongezo luya kusebenza kuzo zombini iGoogle Chrome, Firefox okanye iOpera, kunye nezikhangeli ezisekwe kwezi zangaphambili okanye ezixhasa inkqubo yazo yokongeza kuzo.
Ngoku inyathelo elilandelayo kukuya kwiwebhusayithi esemthethweni yolwandiso lweGnome kunye Sinokubona icandelo apho lisitshela ukuba sifuna ukuxhaswa ukuze sikwazi ukufaka izandiso ngokuthe ngqo kwisikhangeli sethu.
Okanye ukuba ukhetha:
KwiGoogle Chrome, iChromium, kunye neVivaldi, faka iplagi nge Isitolo sewebhu se-Chrome.
KwiFirefox, faka ukongeza kwisiza Mozilla Addons.
KwiOpera, yifake kwindawo yeOpera Addons.
Ngokucofa kwiqhosha ukufaka i-add-on, iya kongezwa kwisikhangeli sethu, unokucelwa ukuba uqalise kwakhona umkhangeli wakho, yivale kwaye uyivule kwakhona
Nje ukuba kwenziwe oku, sibuyela kwiphepha elisemthethweni lezandiso ze-Gnome, siya kuba nakho ukuqaphela ukuba umyalezo ulahlekile kwaye utshintsho luyavela esinokufaka okanye sisuse ulwandiso lweGnome Shell kwisikhangeli.
Ulawula njani ulwandiso lweGnome Shell ku-Ubuntu 18.04?
Ukulawula ezi zinto kwinkqubo yethu sinesixhobo ukuba ngaphezulu kwesinye siyazi, yile ndlela ndithetha ngayo Isixhobo seGnome Tweak Inephepha lokulawula ulwandiso lweGnome Shell.
Ukuyifaka Kuya kufuneka bayijonge njenge 'Gnome Tweaks.''Kwisicelo seSoftware Ubuntu kwaye uyifake.
Ke Kuya kufuneka basebenzise isixhobo kuphela Ukucoca kunye nokulawula ulwandiso lweGnome Shell kwi "Izandiso" isithuba.
Ukufaka iphakheji yolwandiso lwe-Gnome kwii-Ubuntu zokugcina
Ubuntu, kunye nolunye usasazo lweLinux olunenguqulo okanye olusebenzisa iGnome Shell njengendawo yedesktop zihlala zibonelela ngepakeji ngeseti encinci yolwandiso lweGnome, ngaphandle kohlobo lwendalo abayisebenzisayo, le phakheji iyahambelana ngokupheleleyo nayo.
Ngokusisiseko phakathi kwe-8 ukuya kwi-10 yolwandiso iya kufakwa kwinkqubo, ukulungiselela oku Kuphela kufuneka sivule i-terminal kwaye senze lo myalelo ulandelayo:
Nje ukuba kwenziwe oku, singaya kwiwebhusayithi esemthethweni yolwandiso okanye kwiGnome Tweak Tool kwaye sinokubona izandiso ezitsha ezifakiweyo zilungele ukwenziwa ukuba zisetyenziswe kwinkqubo yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » gnome » Nika amandla ukufakwa kwe-Gnome extensions kwi-Ubuntu 18.04 LTS
Ngaba i-fart iqokobhe ayiyiyo yemveli, ayithathi?
Emva kokuchwetheza imiyalelo kwi-terminal, ukukhuphela yonke into ngokuchanekileyo, ayisebenzi ...
Ngaba unolunye ukhetho olunokuzama ukudibanisa olu lwandiso kwikhompyuter yam?
Ukuba ufake ukudityaniswa, kwanele ukongeza kwisikhangeli sakho kwaye kuphela kwendlela, akufuneki isilele.
Ngowuphi umkhangeli owenza oku?